Google inotangisa Android 12 Yekuvandudza Ratidziro 1 ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Google inoburitsa Android 12 Yekuvandudza Ratidziro 1, ine blog yakatumirwa kune vanogadzira, Google nguva pfupi yadarika yazivisa kuvhurwa kwe Chekutanga Android Yekuvandudza Yekutanga 12, uko kumwe kufambira mberi kwakaparadzirwa mumazuva apfuura. Isu tangori pakutanga kwerwendo rwunogara kweinopfuura mwedzi mitanhatu uye rwuchatitungamira, pamwe munaGunyana, kune kuvhurwa kweshanduro yakagadzikana.
Google inotangisa Android 12 Yekuvandudza Ratidziro 1, chii chitsva uye maitiro ekuiisa
Saka regai tione kuti ndeipi nhau dzekutanga, dzakakamurwa nemhando, kuti tinzwisise zvirinani kuti Google inovavarira sei kugadzirisa iyo Android chiitiko, zviri pachena kuve nekufunga kuti mamwe mabasa anogona kutsakatika mune ramangwana shanduro uye mamwe anogona kutora nzvimbo.
Nyowani mu Android 12
Kune nharaunda nhatu umo Google inoburitsa Android 12 Yekuvandudza Yekutanga 1, saka yakagadzirirwa kubvumira vanogadzira kuti vatange kuziva izvo zvitsva uye vagadzirise maitiro avo kune zvitsva zvavanoda uye zvinoshanda.
Vandudza Android zvakavanzika uye chengetedzo
La Zvekuvanzika zvinogara zvichikosha kwazvo kuGoogle uye Android 12 hazvisi izvo mune izvi. Kunyanya, iyo yekuvandudza inotarisa pakujeka kune vashandisi, iine nyowani yekudzivirira kuve nechokwadi chekuti data ravo rinogara rakachengeteka.
Webview ikozvino inosanganisira maitiro matsva ekuki kubva kuSamesite, iyo inovimbisa a kuchengeteka kukuru, kuvanzika uye pachena mukushandiswa kwemakuki pane ese masaiti. Pashure pei Android 11 inorambidza kushandiswa kweMac Netlink identifiers, Android 12 inovhara kupinda kwadzo kuburikidza nechero application, zvisinei nezinga reiyo SDK yashandiswa.
Kudzivirira kunyorera kubva mukusaziva kuendesa kunze rumwe ruzivo, iyo Maitiro ehunhu eApple: anotumirwa kunze zvachinja uye chinofanira kunyatso kuziviswa. Saka vagadziri vanofanirwa kutarisa zvinhu zvavo mufaera rekuratidzira ye dzivisa kuisa zvikanganiso. Nhau zvakare dzezvakamirira izvo zvinofanirwa kuzivisa mureza wekuchinja.
Android 12 Chengetedzo
Android 12 zvakare zvinangwa kunatsiridza mudziyo kuchengeteka ayo anoshandiswa munzvimbo yebasa. Semuenzaniso, zvinogoneka seta password yakaoma kunzwisisa, kudzivirira zviitiko zvakawanda zvepassword zvakakanganwika, pasina kudzikisira danho rekuchengetedza.
Chero zvazvingaitika, maneja maneja anokwanisa kumisikidza nhanho yakasiyana yekunetseka kuwana iyo yakanyanya kunetsa datazvisinei ne password yekuwana. Chikumbiro chekuwedzera kuomarara kwepassword zvakare chichava nyore, pamwe nemukana wekushandisa iro rakafanana password kuti ushandise wega, kana uchibvumidzwa nemaneja.
Munguva iyo manyorerwo ehukama anochengeterwa padiki, maneja achave nematurusi matsva uye kugona kwe chengetedzo chitupa manejimendi, kubvumira vashandi vanosvika kunyange kure, nenzira yakapusa. Uye a kuzivikanwa kwega kwega mudziyokana, kuita nyore maitiro kana mushandisi akasiya kambani kana mushure mekugadzirisazve fekitori. Mazhinji mamwe matsva achaunzwa neiri kuuya Anovandudza Ekutanga.
Mushandisi ruzivo maturusi
Zviripachena, ruzivo rwevashandisi haruregererwe, nehunyanzvi yakagadzirirwa kunatsiridza mashandiro uye kuita iyo sisitimu kutonyanya kuwanda uye kushanda. Transcoding yezvinyorwa zvemultimedia inoziviswa, inobatsira, semuenzaniso, kune izvo zvinoshandiswa zvisingaenderane nehevc codec. Na Android 12, mafomu asingatsigire HEVC anozokwanisa kushandisa transcoding muAVC fomati: zvichave zvakafanira kuti utore nguva inodiwa pakuita, zvinoenderana nehunhu hwehardware yechigadzirwa. Iyo Pixel 4, semuenzaniso, inotora angangoita masekondi mapfumbamwe kukomberedza vhidhiyo yeminiti-imwe mu9p pamasekondi makumi matatu pasekondi. Basa racho rinenge richishanda pane ese madhijitari anoshandisa iyo HEVC fomati yekutora vhidhiyo.
Se inosuma AV1 mufananidzo rutsigiro (iine .avif yekuwedzera) inokwanisa kuve nemifananidzo uye kuteedzana kwemifananidzo, iine shanduko yakatarwa pamusoro pehunhu hwakavimbiswa ne JPEG yakajairwa.
Iwo manejimendi ekumberi masevhisi, ayo asingakwanise kukumbirwa neashure masevhisi, akagadziridzwa. Android 12 inosuma mhando nyowani yebasa mu basa scheduler yekuona kukoshesa kwakanyanya kwekugadziriswa uye network kuwana, kunyangwe simba risingakwanisike.
Pano panouya a itsva API yehupfumi hwezvinhu manejimendi, iyo inokutendera iwe kubata zvemukati kubva kubhodhi clipboard, kubva kune iyo keyboard, kana nekudhonza uye kudonhedza. Kuti uwane rumwe ruzivo, ona iri peji.
Natsiridza ruzivo rwevashandisi
Natsiridza dive yako ne kugona kuenzanisa mhinduro haptic ine odhiyo iri kuridzwa, yemitambo yakasiyana zvachose uye yekuteerera zviitiko. Zvichakwanisika kutevedzera nzvimbo dzakaomarara panguva yemutambo unomhanya kana kugadzirisa kudengenyeka kunoenderana nekufona. Tsigiro inowedzerwawo yekutamba kweMPEG-H zvemukati, nepo optimization yeaudio mixer uye mhedzisiro inosvika makumi maviri nematanhatu yakawedzerwa.
Iyo inonyudza modhi yakawedzeredzwa zvakareruka, nemasaini akareruka, asi pamusoro pezvose zvinoenderana mune yega yega application. Kana iri mumodi yakazara skrini yemutambo inoshanduka zvishoma, mune zvimwe zviitiko zvevashandisi zvichave nyore kufamba nhare mbozha neswipe imwechete.
Iniwo ndinoziva vandudza zviziviso, ine dhizaini yazvino, yakawanda nyore kushandisa uye zvinoshanda. Android 12 Yekuvandudza Ratidziro 1 yeVagadziri Izvo zvinounzawo nhau kudhirowa, shanduko uye mifananidzo, asi zvimwe zvinhu zvitsva zviri kuuya.
Android 12 ichaita maapplication kutanga kubva kuzviziviso nekukurumidza, kudzivisa mazhinji ehunyanzvi anoshandiswa nevagadziri akatungamira kudzikira mukuita. Ichi chitsva chichava chakakodzera maficha akagadzirirwa Android 12, asi izvo zvisina kuvandudzwa zvicharangwa nemapopu ayo acharatidza chiitiko chiri kuitika.
Greater application kuenderana
Google inoenderera mberi nekuvandudza maitiro ekuvandudza maitiro, ichisiya vanogadzira nguva yakawanda yekugadzirisa kune zvakawanda zvitsva maficha, ayo anogona kuburitswa kunze zvishoma nezvishoma. Zvakawanda uye zvakawanda zvehurongwa zvikamu zvichagadziriswa kuburikidza neiyo Play Store, kutanga ne Module yeART izvo zvinokutendera iwe kuti utumire system raibhurari inogadziridza uye izvo zvinhu zvikuru nekukurumidza. Google inogona kuvandudza mashandiro, zvirinani manejimendi ndangariro, gadzirisa hunhu husina kujairika, uye nezvimwe pasina kuvhura yakazara sisitimu yekugadzirisa.
Iko kune zvakare optimizations yeMatafura, ekupeta zvishandiso uye makuru masikirini (ane Android TV 12), mitezo mitsva yeanopindirana isina kubatana ne SDK uye yakapusa kureruka mukugadzirisa mashandiro ekushandisa.
Hazvishamise zvine chekuita nerondedzero yemidziyo Google inoenderana neApple 12. Kunze kweiyo Pixel 2, iyo yasvika kumagumo ehupenyu hwayo, iyo sisitimu nyowani ichaiswa paGoogle Pixel 3 / 3XL, Pixel 3a / 3a XL, Pixel 4 / 4XL, Pixel 4a / 4a 5G uye Pixel 5.
Zviripachena, shanduro dzekutanga dzinonyanya kuitirwa vagadziri uye hadzina kugadzirirwa kushandiswa kwemazuva ese. Saka Android 12 inogona kutorwa pasi chete pamurume, nepo otomatiki maitiro isu tichafanirwa kumirira yekutanga beta, iyo inosvika mumwedzi mishoma kune iyo Android Beta chirongwa.
Maitiro ekurodha pasi nekuisa Android 12
Kana iwe wagadzirira kuyedza Android 12, rangarira kuita backup sezvo maitiro ekumisikidza achabvisa zvirimo muchinhu.
Google Chrome inobvumidza kunyararidza zviziviso zvewebhu zveApple
Maitiro ekudzoreredza mutsetse webhuruu weGoogle Mepu paApple
Ndeapi matsva marongero eWhatsApp Android